Lacie Hard Disk Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka cajaladaha Lacie Hard
4 .1 Recovery HD
4 2 Mac Hard Drive Recovery
4 .3 Macbook Pro Hard Drive Recovery
4 4 iMac Hard Drive Recovery
Maalmahan, qaar badan oo ka users computer jecel yihiin in ay isticmaalaan cajaladaha adag dibadda sida Lacie HDD in uu kaydiyo, kala iibsiga iyo files gurmad. Waa dhab hab wanaagsan in uu kaydiyo xogta weyn, oo ku haboon aad u dhaqaajin karin, waxaa ku xidhmaan kombiyuutarada, laptops iyo qalab kale oo si fudud u la cable ah digital. Markasta oo meel kasta, waxaad la wadaagi kartaa sawiro, filimada la saaxiibo aan loo kala soocin.
Laakiin waxaa sidoo kale la gaaray waqtigii xun qaar ka mid ah. Waxaad la kulmi kartaa dhibaato gaar ah in ay lumiyaan xogta aad ku Lacie disk adag, sida tirtirka shil ah, qaab xijaab, musuqmaasuqa disk iyo sababo kale oo aan la garanayn. Haddii aad taageeray aad Lacie disk adag, taasna dhibaato ma lahan aad u. Maxaa dhacaya haddii aadan haysan gurmad ah? Ha ka fiirsan faylasha aad ayaa waxaa si joogto ah distroyed. Waxaad weli tahay mid aad u nasiib badan, maxaa yeelay, waxaa jira fursad kuu wanaagsan in aad soo kaban karto, files lumay la software soo kabashada.
On Kaliya hal wax oo aad u baahan tahay in ay muhiim ah isha: Jooji isticmaalka aad disk ama xijaab meesha aad ku badiyay xogta muhiimka ah si ay u kaydiso files cusub. Files New overwrite doonaa kuwii hore, oo overwritten iyaga ka dhigi doonaa unrecoverable.
Sidee inuu ka soo kabsado files ka cajaladaha adag LaCie
Haddaba heli soo dhex galay sida inuu ka soo kabsado files lumay ka Lacie cajaladaha adag. Marka hore, waxaad u baahan tahay in ay Lacie disk adag qalab kabashada xogta. Haddii aadan haysan mid, waxaa jooga talo: Wondershare Data Recovery ama Wondershare Data Recovery for Mac, kuwaas oo software lagu kalsoonaan karo oo aad u xirfad leh. Oo iyaga waxaa la idin soo kaban karto, files lumay, oo ay ku jiraan waraaqaha, sawiro, videos, files audio iyo ka badan, ka Lacie disk adag ee Windows ama Mac OS, dhididka ma. Bal aan u aragno in tallaabo hoos ku qoran.
Download version maxkamad barnaamijka hoose iyo qaato isku day ah oo bilaash ah!
Talooyin : HA rakibi barnaamijka si Risaalo ka mid ah meesha aad xogta laga badiyay iskaga waxaa overwriting.
Halkan, aynu isku dayi version Windows ee this Lacie HDD software kabashada xogta wada.
Step1 Dooro habka soo kabasho: Wizard & Standard Mode
Kadib markii ay Lacie software kabashada disk adag ka, waxaad heli kartaa laba hababka soo kabashada raaca Doorashadaada: Wizard (sida default a) iyo Standard Mode.
Step2 Dooro nooca file aad rabto in aad ka soo kabsado Lacie cajaladaha adag ka.
Step3 Dooro goobta file soo-celinta sida ay tilmaanta.
Step4 loo sahlo baaritaan qoto dheer oo Start, ama aad ka boodi kartaa haddii aad disk aan la formatted.
Step5 Kulanka Xiisaha Leh files badiyay Lacie HDD iyo soo fudayd.
> Resource > Hard Drive > Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka cajaladaha Lacie Hard